जेष्ठ २ गते शुक्रबार बि.सं. २०७७ साल पञ्चाङ्ग र राशिफलसँगै पाथिभारा माताको दर्शन गरौं – Complete Nepali News Portal
जेष्ठ २ गते शुक्रबार बि.सं. २०७७ साल पञ्चाङ्ग र राशिफलसँगै पाथिभारा माताको दर्शन गरौं
ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) सम्पर्क नं +९७७– ९८४२२१९७३५ आजको राशिफल बि.सं. २०७७ साल जेष्ठ २ गते शुक्रबार
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) – अशुभ समाचारको आगमनले मनमा उदासी छाउने छ । मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुनेछ । गरेका काममा छिट्टै सफलता प्राप्त नहुँदा दिक्क लाग्नेछ । खर्चालु समय छ, चिताउँदै नचिताएको कुनै क्षेत्रमा खर्च बढ्ने सम्भावना छ । सामाजिक सभासमारोहमा सहभागी बन्नुपर्ने भएकाले गर्नैपर्ने कुनै काममा अवरोध हुनसक्छ । गृहिणीहरूका लागि घरायसी वातावरणसमेत निराशापूर्ण हुनेछ, पुरानो लेनदेन वा प्रशासनिक झमेलाले पिरोल्न सक्छ । खानपिनको समयमा पनि हेरफेर हुने समय छ । शरीरमा आलस्य र थकानको अनुभूति हुनेछ । गरेका काममा सोचेबमोजिम साथसहयोग वा सद्भाव मिल्न कठिन छ । साथीभाइ टाढिने दिन हो, छात्रछात्राले मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा ध्यान दिनाले पठनपाठन बिथोलिने समय छ ।
मेष ९चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ० – पराक्रम र प्रसिद्धिमा वृद्धि हुने समय छ । मिहिनेत गर्नुपर्छ, जे गरे पनि सफलता आर्जन हुने दिन छ । देवालय मठ मन्दिर आदिको भ्रमण र दर्शन हुनेछ वा धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फको काममा सहभागी बन्नु पर्ला । नोकरी गर्नेले मानसम्मान पाउने छन् । प्रशासनिक र राज्यपक्षबाट हुनुपर्ने काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । विद्यार्थीहरूले पठनपाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने छ । इष्टमित्रले प्रदान गरेको सल्लाहलाई पालना गर्दा फाइदा हुने योग छ । विश्वासको वातावरण बन्नेछ । आत्मबल र निर्णय क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । घरायसी वातावरणमा सुधार आउने छ, रमाइलो पारिवारिक जमघट हुनसक्छ ।
शुभरङ्ग स् कालो, शुभअङ्क स् ३, शुभदिशा स् पश्चिम, इष्टदेवता स् सरस्वती माता, अशुभ रङ्ग स् घिउरङ्गरक्रिम, अशुभ अङ्क स् ६, अशुभ दिशा स् दक्षिण, कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ नीलसरस्वत्यै नमः न्यूनतम जापसङ्ख्या स् २३, के गर्ने स् छोराछोरीको उन्नतिरप्रगतिको जानकारी लिने, के नगर्ने स् ठूलाबडा र मान्यजनको बेवास्ता
बृष ९इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो० – स्वास्थ्यस्थिति राम्रो रहनुका साथै काम गर्ने जाँगर बढ्ने छ । गृहिणीहरूको पारिवारिक सुखसम्मृद्धिमा बृद्धि हुनेछ । काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नुका साथै उन्नति गर्ने अवसर प्राप्त हुने योग छ । नवीन रोजगारीको सम्भावना छ । छात्रछात्रा प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा सफल हुनेछन् । धैर्यधारण गरी परिश्रम गर्ने दिन हो । मातापिता र अभिभावकवर्गको स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ । कर्मचारीले हाकिमबाट महत्वपूर्ण कुरा फुत्काउन सक्छन् । ठूलाबडाको सहयोग र सल्लाहले राम्रो फाइदा लिन सकिने छ । सन्तानपक्षबाट राम्रै सरसहयोग प्राप्त हुनेछ । व्यापाररव्यवसायमा सोचेजति लाभ पाइने छ । आफ्नो क्षेत्रमा साख रहनेछ ।
शुभरङ्ग स् ध्वाँसे, शुभअङ्क स् ६, शुभदिशा स् दक्षिण, इष्टदेवता स् महालक्ष्मी, अशुभ रङ्ग स् कलेजी, अशुभ अङ्क स् ५, अशुभ दिशा स् पूर्व, कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ भूमिदेव्यै नमः न्यूनतम जापसङ्ख्या स् २३, के गर्ने स् हाकिम, मान्यजन र पिताका चाहना बुझ्ने, के नगर्ने स् लोभ र मोह
मिथुन ९का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह० – आज गृहिणीहरूले परोपकारी काममा खट्नु पर्ने दिन छ । दान, पुण्यका कार्यमा आकर्षण बढ्ने छ । पर्यटकीय स्थल, तीर्थ वा मन्दिरको भ्रमण हुनसक्छ । विद्यार्थीहरूले ज्ञानगुन र बौद्धिक क्षेत्रमा गरेको प्रयास सफल हुनेछ । बन्दव्यापार फस्टाउने छ । आम्दानीमा कमी हुने छैन । सानो प्रयासले रोकिएको काम बन्नेछ । पारमार्थिक काममा खट्नु पर्ने समय छ । धार्मिकरसामाजिक क्षेत्रमा समय दिन सकिन्छ । तर्कवितर्क र प्रतिस्पर्धामा विजयी भइने छ । घरपरिवारमा सुमधुर वातावरण सिर्जना हुनेछ । साथीभाइले सकेको सहयोग गर्नेछन् । प्रेम र प्रणयप्रसङ्गका लागि पनि समय अनुकूल छ । सानो प्रयासले भाग्यबल बृद्धि गर्न सकिने दिन छ ।
शुभरङ्ग स् सेतो वा पहेंलो, शुभअङ्क स् ५, शुभदिशा स् पूर्व, इष्टदेवता स् कुलगुरुरशिवजी, अशुभ रङ्ग स् चम्किलोरउज्यालो, अशुभ अङ्क स् ४, अशुभ दिशा स् उत्तर
कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ गुरवे नमः, न्यूनतम जापसङ्ख्या स् १९, के गर्ने स् बृद्धबृद्धा, असहाय र दीनहीन अवस्थाका व्यक्तिको सहयोग, के नगर्ने स् आडम्बर र ढोंगीपन
कर्कट ९हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो० – भाग्यस्थानमा चन्द्रमाको प्रवेश हुँदैछ, तर पनि परिस्थिति विपक्षमा नै रहने सङ्केत देखिन्छ । छात्रछात्राले गरेको कडा परिश्रम व्यर्थै खेर जान सक्छ । कर्मचारी र जागिरेहरूको हाकिम वा सिनियर्ससँग चित्त नबुझ्न सक्छ । बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्छ किनकि भनेको कुराले विपरीत अर्थ वहन गर्नेछ । आज कसैले पनि नयाँ साथीभाइलाई झट्ट विश्वासमा लिनु हुँदैन । सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ । कताकता भाग्यबलमा कमी भएको आभास गर्नु हुनेछ । बन्दव्यापार र रोजगारीको क्षेत्रमा लगनशील र सक्रिय भएमा मात्र सफलता पाउनु हुनेछ । दाम्पत्य जीवन पनि निराशापूर्ण नै रहने छ । दिउँसोबाट निराशाको अन्त्य हुनसक्छ ।
शुभरङ्ग स् कालो, शुभअङ्क स् ८, शुभदिशा स् उत्तर, इष्टदेवता स् कालभैरव, अशुभ रङ्ग स् हरियो, अशुभ अङ्क स् ३, अशुभ दिशा स् पश्चिम, कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ कालभैरवाय नमः, न्यूनतम जापसङ्ख्या स् १०, के गर्ने स् उत्ताउलोपन, चञ्चलता र हडबडीमा नियन्त्रण्, के नगर्ने स् असुरक्षित यात्रा
सिंह मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे० – मन रोमान्टिक र भावुक बन्नेछ । रमझम र मनोरञ्जनमा आकर्षण बढ्न सक्छ । आज प्रायः सबैको घुमघाम, भेटघाट र मनोरञ्जनमा दिन बित्नेछ । मेजमानीको अनुकूलता प्राप्त हुनेछ । दाम्पत्यसम्बन्ध सुखद रहनेछ । प्रेमको बन्धनमा बाँधिने बेला छ । परोपकारका क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ । स्वास्थ्यस्थितिमा अनुकूलता आउनेछ । काम गर्न जाँगर चल्नेछ, उत्साहवद्र्धक समय छ, आम्दानी बढ्न सक्छ । दिन ढल्दै जाँदा जिम्मेबारीबोध बढ्दै जानेछ, रामरमाइलो त्यागेर व्यवसायिक गतिविधिमा संलग्न हुन मन लाग्नेछ । आम्दानीका दृष्टिले नराम्रो छैन, तर विलासिताका क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्छ । छात्रछात्रा रामरमाइलोमा भुलिने समय छ ।
शुभरङ्ग स् गुलाबी वा सिन्दूरे, शुभअङ्क स् ७, शुभदिशा स् पश्चिम, इष्टदेवता स् शिवर्पावती, अशुभ रङ्ग स् पहेंलो, अशुभ अङ्क स् २, अशुभ दिशा स् दक्षिण
कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ गृहलक्ष्म्यै नमः, न्यूनतम जापसङ्ख्या स् ११, के गर्ने स् परिवारमा अधिकतम समय दिने, के नगर्ने स् ख्यालठट्टा र जिस्क्याउने काम
कन्या ९टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो० – लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने मौका छ । आकस्मिक निम्तोमा सहभागी हुने सम्भावना छ । मिष्ठान्न भोजनको अवसर आउने छ, तर आहारविहारमा विशेष सतर्क रहनु राम्रो हुन्छ । छात्रछात्राहरूले प्रतिस्पर्धा र तर्क वा विवादका क्षेत्रमा सफलता पाउने छन् । कर्मचारीहरूले न्याय सम्पादनका सिलसिलामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । मानसम्मान र प्रतिष्ठाको प्राप्ति हुनसक्छ । आजको विनियोजन र लगानीले उत्तरोत्तर फाइदा हुनेछ । घरायसी सुखसुविधा बढाउने कुनै महँगो वस्तुको किनमेल गर्न मन लालायित हुनेछ । यात्रा लाभप्रद बन्न सक्छ, तर धेरै टाढा जानु पर्दैन ।
शुभरङ्ग स् हलुका सेतो, शुभअङ्क स् ६, शुभदिशा स् दक्षिण, इष्टदेवता स् भगवान् शङ्कर, अशुभ रङ्ग स् सुन्तलेरगुलाबी, अशुभ अङ्क स् १, अशुभ दिशा स् पूर्व
कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ रां राहवे नमः, न्यूनतम जापसङ्ख्या स् ०८, के गर्ने स् समस्या र सङ्कटर्लाइ सार्वजनिक गर्ने, के नगर्ने स् स्वास्थ्यप्रति बेवास्ता
तुला ९र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते० – आत्मबल बढ्ने समय छ । छात्रछात्राका लागि शैक्षिक प्रगतिका लागि अनुकूल समय आएको छ, पठनपाठनमा ध्यान दिनु बेस हुनेछ । ज्ञान र चिन्तन उपयोगी बन्नसक्छ । जागिरेहरूका लागि मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ । गुरुजन, अभिभावक र साथीभाइले उपयोगी र आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नेछन् । गृहिणीहरूले छोराछोरीबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्नेछन् । व्यवसायीहरूले बन्दव्यापारबाट लाभ पाउने समय छ । बन्धुबान्धव र दाजुभाइका तर्फबाट खुशीको खबर प्राप्त हुने छ । प्रायः सबैलाई विपरीतलिङ्गीबाट आवश्यक सहयोग मिल्नेछ । पारिवारिक सहयोग बढ्ने छ ।
शुभरङ्ग स् हलुका नीलो वा हरियो, शुभअङ्क स् १, शुभदिशा स् पूर्व, इष्टदेवता स् सरस्वती माता, अशुभ रङ्ग स् कालो, अशुभ अङ्क स् ३, अशुभ दिशा स् उत्तर, कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ सरस्वत्यै नमः न्यूनतम जापसङ्ख्या स् ०७, के गर्ने स् सिर्जनात्मकता र रचनात्मकतामा जोड दिने, के नगर्ने स् बुद्धिको दुरुपयोग
बृश्चिक ९तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु० – चन्द्रमा अशुभ घरमा छ, त्यसैले तर्कवितर्क, झैझगडा र विवादका विषयमा अघि नबढेको राम्रो हुन्छ, यद्यपि शुभ ग्रहको दृष्टि रहेकाले मान्यजन, हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिसँगको छलफलबाट लाभ हुने सम्भावना छ । प्रेमसम्बन्ध र दाम्पत्यसुखको राम्रो योग छ । स्वास्थ्यस्थितिमा सुधार आउने छ । दिनको सुरुवातमा आलस्य र थकानको महसुस भए पनि आनन्द र उल्लासको वातावरणमा समय व्यतीत हुनेछ । आम्दानीको नयाँ स्रोत देखा पर्नेछ । परदेशमा बसी रोजगारी र व्यवसाय गर्नेहरूले खानपीन र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा खर्च गर्ने सम्भावना छ । सायंकालमा ज्ञानमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने छ ।
शुभरङ्ग स् रातो वा पहेंलो, शुभअङ्क स् ४, शुभदिशा स् उत्तर, इष्टदेवता स् भगवती दुर्गा, अशुभ रङ्ग स् गाढा नीलो, अशुभ अङ्क स् २, अशुभ दिशा स् पश्चिम, कार्यसिद्धि मन्त्र, स् ॐ नमश्चण्डिकायै, न्यूनतम जापसङ्ख्या स् ११, के गर्ने स् पतिरपत्नी, प्रेमीरप्रेमिका वा छोराछोरीको चाहना पूरा गर्ने, के नगर्ने स् घरपरिवारका कुरामा बेवास्ता
धनु ९ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे० – आज विद्यार्थीहरूले पराक्रम र प्रसिद्धि बढाउने समय छ, त्यसैले सानातिना कुरामा अल्मलिएर समय खेर फाल्नु हुँदैन । प्रायः सबैका लागि बन्धुबान्धव, साथीभाइ र मित्रवर्गबाट उत्कृष्ट सहयोगको आशा गर्न सकिन्छ । भाइबहिनीले पनि सन्तुष्ट तुल्याउने छन् । भोजभतेर र खानपिन जस्ता सामाजिक कार्यमा सहभागी बन्नु पर्नेछ । दीर्घकालिक फाइदाका लागि गरिएको प्रयासमा सफलता मिल्नेछ । बन्दव्यापारमा सोचेको फाइदा हुने दिन छ । आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ । झैझगडा र विवादमा विजयी बन्नु हुनेछ तर बोलीवचनमा कडापन त्यागेको राम्रो हुन्छ । पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहने छ ।
शुभरङ्ग स् गाढा नीलो, शुभअङ्क स् ३, शुभदिशा स् पश्चिम, इष्टदेवता स् गणेश, अशुभ रङ्ग स् गुलाबी वा सिन्दूरे, अशुभ अङ्क स् १, अशुभ दिशा स् दक्षिण, कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ सिद्धिविनायकाय नमः, न्यूनतम जापसङ्ख्या स् ०८, के गर्ने स् साथीभाइको सङ्गत र गफगाफमा नियन्त्रण, के नगर्ने स् घमण्ड
मकर ९भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि० – मिष्ठान्न भोजन मिल्नेछ । बोलीको प्रभाव बढ्नेछ, आफन्तले प्रशंसा गर्नेछन्, जाँगर बढ्नेछ । चेलीबेटी र कुटुम्बपक्षका काममा समय दिनु पर्नेछ । बन्दव्यापार राम्रो छ । आर्थिक लगानी बढाउन अनुकूल छ । नयाँ ठाउँमा निवेश र लगानीको वातावरण बन्नेछ, कारोबारमा सुधार आउने योग छ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन् । सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन् । राम्रै फाइदाको योग छ । विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । छात्रछात्राको पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ । कर्मचारीहरूले विशेष सभा–समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ । प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा सफल बन्नुहुने छ ।
शुभरङ्ग स् घिउ रङ, शुभअङ्क स् २, शुभदिशा स् दक्षिण, इष्टदेवता स् लक्ष्मी माता, अशुभ रङ्ग स् पहेंलो, अशुभ अङ्क स् ९, अशुभ दिशा स् पूर्व, कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ महालक्ष्म्यै नमः, न्यूनतम जापसङ्ख्या स् ११, के गर्ने स् सुमधुर बोलीवचनको प्रयोग गर्ने, के नगर्ने स् अनावश्यक खानपान
कुम्भ ९गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द० – नयाँ कामको लागि नयाँ अवसर आउनेछ । निर्माण तथा व्यवहारिक क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ । मन त्यसैत्यसै फुरुङ्ग हुने समय छ । दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन् । आफन्त र मित्रहरूसँग भेटघाट र रमाइलो गरिने छ । घरपरिवारमा राम्रो छ । बन्दव्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । आत्म–विश्वास बढ्नेछ । विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुनेछ । पारिवारिक जमघटमा मन रमाउनेछ । मन पर्ने वस्त्र, अलङ्कार आदि उपहार पाइने योग छ । स्वादिष्ट भोजनको आनन्द समेत पाइएला । बन्दव्यापारबाट लाभ मिल्नेछ । फुर्सद नमिले पनि राम्रो नतिजा हात पर्ने समय छ ।
शुभरङ्ग स् सिन्दूरे रातो, शुभअङ्क स् ९, शुभदिशा स् पूर्व, इष्टदेवता स् हनुमान्, अशुभ रङ्ग स् हरियो, अशुभ अङ्क स् ८, अशुभ दिशा स् उत्तर, कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ हं हनुमते नमः न्यूनतम जापसङ्ख्या स् १०, के गर्ने स् निर्णय गर्दा राम्ररी सोचविचार गर्ने, के नगर्ने स् हडबड र शीघ्रता
मीन ९दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि० – सुरुमा द्वादश भावमा चन्द्रमा भएकाले आर्थिक समस्याले सङ्कट उत्पन्न गर्न सक्छ तर साँझपख उत्साह र उमङ्गमा बृद्धि हुने दिन छ । त्यसैले आज दिनभरि तपाईंले धनको कारोबारमा सतर्क रहनु बेस हुनेछ । अनावश्यक खर्च बढ्रने छ, नचाहेको क्षेत्रमा खर्चको मात्रा ह्वात्तै बढ्न सक्छ । छात्रछात्रा वा किशोरकिशोरीको विवाद र झैझगडामा समय बित्नसक्छ । बिक्रीबट्टा र बन्दव्यापार फाइदा छैन । परिवारका कुनै सदस्यको अस्वस्थताका कारण चिन्ता बढ्ने छ । साँझपख रमाइलोपन र विलासितातर्फ मन आकर्षित हुनेछ । कुनै दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्नु छ भने रातीअबेर वा भोलिदेखि मात्र सहज हुने देखिन्छ ।
शुभरङ्ग स् सेतो वा बैजनी, शुभअङ्क स् ४, शुभदिशा स् उत्तर, इष्टदेवता स् धर्मराज, अशुभ रङ्ग स् हरियोरचम्किलो, अशुभ अङ्क स् ७, अशुभ दिशा स् पश्चिम, कार्यसिद्धि मन्त्र, स् ॐ चित्रगुप्ताय नमः, न्यूनतम जापसङ्ख्या स् १९, के गर्ने स् दान, धर्म, परोपकार, के नगर्ने स् रिसराग, उद्वेग र क्रोध